Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguLotusEaterAsia
IBoutique 87, ekwabizwa ngokuba yiNombolo ye-87 eBentota yenzelwe nguGeoffrey Bawa njengendawo entle yetropiki.
Sinikezela ngeendwendwe zethu ukuzola kunye nobunewunewu, indawo efanelekileyo yokuzonwabisa kwiimvakalelo zakho.
Igumbi lakho liza nebhulu eliya kukunceda ngazo naziphi na iimfuno onokuba nazo, sicebisa ukuba uzibuze kwigadi yethu yeehektare ezili-17 kwaye ukhethe indawo oyithandayo yosuku, mhlawumbi ezimbini kuba zininzi ezinokufunyanwa. Ngamana inokuba phantsi komthi okanye ngasemachibini ethu okanye ezininzi iifoli ezisasazeke kuyo yonke indawo. Zenze ukhululeke ngokupheleleyo! Yindlela yokuphila yeLotusEater
IBoutique 87 yakhiwa ngasekupheleni kweminyaka yoo-1960 kwaye yayilwa yaza yakhiwa nguGeoffrey Bawa esenzela uLydia Duchini Gunasekara, owayesakuba ngunjingalwazi wemifanekiso eqingqiweyo kwiYunivesithi yaseMilan. Wayenoxanduva lwemifanekiso eqingqiweyo emininzi emihle kweso siza.
Ngowe-1994, lo mhlaba waphinda wathengwa waza wandiswa waya kutsho kwiihektare ezili-17. UGeoffrey Bawa uye waphinda wagunyaziswa emva kokuba ayibuyisele kwaye ayihlaziye.
I-Boutique 87 iqulathe iihektare ezilishumi elinesixhenxe zegadi yasehlathini, amachibi kunye ne-marshland; ikhaya leentaka, izilwanyana ezirhubuluzayo, izinambuzane, iintlanzi kunye nezilwanyana zasendle, ezinye zikho eSri Lanka.
Igumbi lakho liza nebhulu eliya kukunceda ngazo naziphi na iimfuno onokuba nazo, sicebisa ukuba uzibuze kwigadi yethu yeehektare ezili-17 kwaye ukhethe i…
4.94 (iingxelo zokuhlola 16)
Sihamba ngemizuzu eyi-10 ukuya elunxwemeni, imizuzu engama-20 ukuya eLunuganga ( Ekhaya kuGeoffrey Bawa)
Umbuki zindwendwe ngu- LotusEaterAsia
Ngaphambi kokufika kwi-Boutique 87, iofisi yethu yokubhukisha iyakwazi ukwenza amalungiselelo ohambo lwakho; ekufikeni kwethu uMphathi uDulanjaya uya kusinceda ngazo naziphi na ezinye iimfuno. Ungaodola isidlo sakusasa, isidlo sasemini, isidlo sangokuhlwa okanye amashwamshwam nangaliphi na ixesha ngokuhlala kwakho.
Okanye uphume uye elunxwemeni, olukuhambo lwemizuzu emi-5 ukusuka eBoutique87
Ngaphambi kokufika kwi-Boutique 87, iofisi yethu yokubhukisha iyakwazi ukwenza amalungiselelo ohambo lwakho; ekufikeni kwethu uMphathi uDulanjaya uya kusinceda ngazo naziphi na ezi…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bentota